Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị nsogbu ị ga-eche ihu mgbe upgrading ka iOS 9. Ọ bụkwa otu n'ime ndị kasị siva na ọrụ ọ maghị ihe na-eme mgbe ha na-ezute nsogbu a. Nsogbu ukwuu n'ime ayarade dị ka a ide ihuenyo na Apple logo ozugbo ị na-atụgharị na ekwentị gị mgbe mmelite. All ị na-ahụ bụ oghere na peeji na ihe ọ bụla ọzọ.
Nke a bụ nnukwu nsogbu n'ihi na ọtụtụ ọrụ karịsịa mgbe ị na-amaghị otú tufuo ya dịkarịa ala niile ihe e nwere ike na-eme ka ya. Luckily, e nwere ụzọ idozi nsogbu a dị ka anyị ga-ahụ obere oge.
Part 1: Olee otú Idozi White Apple kpatara iOS 9 Update
Part 2: Olee otú Zere White Apple mgbe upgrading ka iOS 9
Part 1. Olee idozi White Apple kpatara iOS 9 Update
Iji idozi nke a njehie, i kwesịrị ntakịrị ihe nke enyemaka. Otu n'ime ndị kasị irè ngwa maka iOS na-Wondershare Dr.Fone maka iOS. Nke a ngwa e mere iji hụ na gị iOS ngwaọrụ na-agba ọsọ na zuru ike ma na-arụ ọrụ dị ka ha kwesịrị. Ụfọdụ n'ime atụmatụ na a ngwa nwere na i nwere ike ahu nagide agụnye:
iPhone data mgbake software
Naghachi niile nke gị ehichapụ data gụnyere ozi, photos, kọntaktị, videos si gị iOS ngwaọrụ.
Enye gị ohere iji naghachi furu efu data
-Enye gị ohere nkwado ndabere na mpaghara weghachite iOS ngwaọrụ. Ị pụrụ ọbụna ịhọrọ data ị ga-achọ ndabere.
Idozi ịwa usoro nke ụfọdụ iOS ngwaọrụ
Dị ka aha-atụ aro, na niile ùgwù, a nifty software si Wondershare bụ n'ezie nanị dọkịta n'ihi iOS ngwaọrụ ị ga-mkpa mgbe ọ bụla, karịsịa gị iPhone. Dr.Fone Si Wondershare bụ ụwa mbụ data mgbake software iPhone na iPad.
Iji Dr.Fone, ị nwere ike ime ya niile; chọrọ iji naghachi kọntaktị - nnọọ i nwere ike, chọrọ na-niile ozi gị azụ - gịnị mere? Olee banyere foto, ndetu wdg si gị iPhone - Ee, ị pụrụ kpam kpam naghachi niile nke ndị a si gị bricked iPhone.
Na, ọ bụghị naanị na, Wondershare Dr.Fone bụ dakọtara na iPhone, iPad na iPod aka na-arụ ọrụ nke ọma na ihe ọ bụla nke iOS ngwaọrụ. Na-enweghị ihe ọ bụla ọzọ adieu, ka anyị na-anya na otú i nwere ike iji Dr.Fone idozi gị bricked iPhone na e mere site iOS 9 update.
Nzọụkwụ otu: Download na wụnye Wondershare Dr.Fone gị na kọmputa na mgbe ahụ jikọọ ekwentị gị na kọmputa gị site na iji USB cables.
Nzọụkwụ Abụọ: On isi window, pịa "Idozi iOS ka nkịtị" na Dr.Fone ga chọpụta ngwaọrụ gị, otu ugboro ngwaọrụ e achọpụtara click on "Malite."
Nzọụkwụ atọ: Pịa na Download n'ihi Dr. ekwentị kwesịrị ibudata ọhụrụ version gị femụwe iji idozi ngwaọrụ gị. Chere maka download mezue.
Ka anya dị ka download zuru ezu Dr. Fone ga-amalite ịrụzi ngwaọrụ gị. Zuru ezu idozi nke ngwaọrụ gị ga-ọ dịghị ihe karịrị nkeji 10 mgbe nke ị ga-enweta ozi na-ngwaọrụ gị ga ugbu a Malitegharịa ekwentị kwesịrị. Dị nnọọ hụ na gị na ngwaọrụ anọgide ejikọrọ na kọmputa gị n'oge dum usoro.
Wondershare Na-eme ka usoro ya mfe ị ga-enwe ike iwepụ nsogbu a n'oge na-adịghị na-aga azụ gị na-anọkọ iOS ngwaọrụ.
Mgbochi dị mma karịa ọgwụgwọ na e nwere ọtụtụ ụzọ ị pụrụ isi gbochie mmalite nke nsogbu a. Ka anya na ụfọdụ n'ime ụzọ i nwere ike na ngwaọrụ gị si enwe nsogbu a.
Part 2. Olee Zere White Apple mgbe upgrading ka iOS 9
Onye n'aka ụzọ na-na ekwentị gị site na-egosi na nsogbu a bụ ịkpachara anya na ngwaọrụ. Nsogbu a nwere ike mere site mgbe niile na idobe ma ọ bụ na-eti na ekwentị gị. Chebe ekwentị gị dị ukwuu dị ka pụrụ izere mebiri.
Ịzụ a na-echebe ikpe n'ihi na ekwentị gị. Echebe ikpe ga-instrumental na huu na ekwentị gị na-agaghị mebiri emebi site mmetụta na ike na-ebupụta dị ka tebụl.
Gbanyụọ ekwentị gị mgbe ị na-adịghị mkpa ya. Eme ihe gabiga ókè nke na batrị gi na ndị ọzọ na ngwaike ego nwere ike ime ka gị na ngwaọrụ igosipụta ole na ole nsogbu gụnyere "White Apple." Ọ bụrụ na ị na-achọpụta na ekwentị gị na-selata, gbanyụọ ya site n'oge ruo n'oge na-ekwe ka ọ na rejuvenate.
Nọgidenụ na-iOS emelitere. Mgbe ụfọdụ nsogbu a na-kpatara glitches na software na mkpa ka ị mgbe niile ego maka software mmelite na ekwentị gị na hụ na gị na iOS bụ ruo ụbọchị.
Nye ekwentị gị a ezumike. I nwere ike ime nke a site na-atụgharị ekwentị gị apụ n'ihi na ọ dịkarịa ala 10 sekọnd ozugbo ọ bụla ọnwa. Nke a dị mfe edinam ga-ekwe ka ekwentị gị oge revitalize ma gbochie ụfọdụ glitches ọbụna "White Apple ihuenyo."
iPhone Kalinda Nsogbu
Top Iri 8mm Video égwu iPhone na gam akporo Smartphone
3 égwu ka mmekọrịta iPhone Ndi ana-akpo
iPhone Music Manager: Export / Import / Hichapụ Music on iPhone
Olee otú Ọkụ iPhone Video ka DVD Watch na TV
> Resource> iPhone> okosobode White Apple ezie upgrading ka iOS 9?